Ny Valosoa, 06 Jolay 2017. Emmo Reg-Mahamasina, efa an-dalana ireo avy lavitra, fitondrana Hvm, Cua-Antananarivo. | Mouvement des Citoyens Malagasy de Paris
← HVM sy ny jadona, 05/07/2017. Noravan’ny Emmoreg ny fitaovan’ny Tim ao Mahamasina. Vidéo.
Fananan’ny CUA-Antananarivo, Fanambarana: « Atsaharo ny fandrobana, fanapotehana… ireo fananam-bahoaka ». →
Ny Valosoa, 06 Jolay 2017. Emmo Reg-Mahamasina, efa an-dalana ireo avy lavitra, fitondrana Hvm, Cua-Antananarivo.
8 jolay eny Mahamasina
Tompon’antoka amin’ny filaminana ny antoko TIM
Tsy namelan’ny mpanao gazety indray ny filoha Marc Ravalomanana, filoha nasionalin’ny antoko Tiako i Madagasikara (TIM), raha tsy namaly ny fanontanian’izy ireo ny mikasika ny fankalazàna ny fety hatao ao Mahamasina ny sabotsy 8 jolay izao, nandritra ny nanaovan’ny ben’ny Tanàna Lalao Ravalomanana sy ny mpanolotsaina manokany ary ny delegasiona namonjy ny fivoriana nataon’ny AIMF tany KANADA sy Afrika Atsimo, tamin’ireo sekretera sy mpitambolan’ny fokontany eto Antananarivo Renivohitra tao amin’ny lapan’ny Tanàna Analakely, ny talata teo .
Nanambara ny filoha Marc Ravalomanana tamin’izany fa tsy mihemotra ary tsy miova ny toerana hanaovana ny fankalazàna fa ao amin’ny kianjan’i Mahamasina ihany ny sabotsy izao, satria efa nahazo fanazoandalana ara-dalàna tany amin’ny prefektora izahay hoy izy ny 30 jona lasa teo . Arak’izany , efa lasa alavitra hoy i Dada ny fandaminana sy ny fanomanana rehetra , ny fanasàna efa any am-pelatanan’ireo olona nasaina rehetra , efa miainga any amin’ny toerana misy azy avy ireo mpikatroka TIM avy any amin’ny faritra 22 manerana ny nosy toy ny any SAVA, Toliary sns… Efa noraisina avokoa hoy izy ny fepetra mikasika ny hahatomombana ny filaminana sy fandriampahalemana ary tsy ho ataon’ny TIM ambanin-javatra izany .
Mikasika ny nambaran’ny prefet fa misy mitady hanakorontana amin’ io andro io dia nahitsy ny filoha Marc Ravalomanana niteny fa afaka miara-miasa sy mifampiresaka mazava amin’ny mpitandro filaminana ny antoko Tiako i Madagasikara, hanampy azy ireo hitandro ny filaminana fa na misy izany na tsy misy dia efa vonona amin’ny lafiny rehetra izahay mba tsy hisian izany lazaina fa korontana izany hoy izy. Tsy misy kabary politika eo Mahamasina amin’io fotoana io , tsy misy fanaratsiana ny fitondràna fa vavaka iraisampinoana , rindrankira , zumba no hatao eo .
Hitondra filaminana eto amin’ny firenena hoy ny filoha Marc Ravalomanana nanome toky ny famelàna antsakany sy andavany ny TIM hankalaza ny faha-15 taona nijoroany .
8 jolay Mahamasina
Efa an-dalana ireo avy any amin’ny faritra 22
Tsy raharahan’Antananarivo irery ny fankalazana ny faha-15 taonan’ny antoko Tiako I Madagasikara (TIM) ny sabotsy 8 jolay izao etsy amin’ny kianjaben’I Mahamasina fa raharahan’I Madagasikara iray manontolo mihitsy.
Araka ny vaovao voaray efa misy ny efa eny an-dalana mihazo ny Renivohitra amin’izao fotoana izao ny avy any amin’ny faritra, toy izany ny avy any amin’ny Faritra Sava: misy ny distrikan’Antalaha, Sambava, Andapa ary Vohemara. Araka ny vaovao nampitain’izy ireo tamin’ny gazety, ny talata teo no efa niainga ireo solontena avy any amin’iny faritra Sava iny. Toy izany koa, niainga ny talata teo ireo solontena sasany avy any amin’ny faritra Androy, toy ny avy any amin’ny distrikan’i Bekily iny. Ny avy amin’ny faritra Atsimo Andrefana: ahitana an’I Morombe, Toliara I sy II,… dia anio alakamisy izy ireo no hiainga avy any Toliara, araka ny vaovao nampitain’izy ireo fiara Sprinter miisa 3 aloha hatreto no fantatra fa hitondra azy ireo. Ny avy any aminr’ny faritra Boegny: Mahajanga I sy II, Marovoay, Mitsinjo,… dia anio ihany koa izy ireo no hanainga avy any Mahajanga, araka ny fantatra fiara Sprinter miisa 7 no hitondra ny delegasiona. Ny avy any amin’ny faritra Alaotra Mangoro dia rahampitso zoma izy ireo no hanainga avy any Ambatondrazaka, mbola tsy fantatra kosa ny isan’ny fiara ho avy hitondra azy ireo, fa ny azo antoka hoy ny filohan’nhy Distim Ambatondrazaka, Andriamatoa Ra-Charles, ho marobe koa ny delegasiona avy any Alaotra Mangoro. Ireo aloha no nahazoam-baovao fa ny any amin’ny faritra hafa ihany koa dia efa nilaza fa ho avy avokoa.
Ny mpiandraikitra aty Antananarivo dia efa nanambara fa misy ny toerana handraisana ireo avy any amin’ny faritra fa mila mitondra lamba mafana sy bodofotsy izy ireo. Na mangatsiaka azan y eto an-dRenivohitra amin’izao ririnina izao, hafana ny lanonana etsy Mahamasina ny sabotsy 8 jolay ho avy izao. Sabotsy izany mifankahita e!
Voaporofo indray ny tsy fahamatoran’ny mpitondra
Efa hatrany am-piandohana no tsikaritra ny tsy fahamatoran’ity fitondrana Hvm ity eo amin’ny fitantanam-pirenena. Mahita ialokalofana sy ialàna bala mandrakariva anefa izy ary iaraha-mahalala rahateo ny fahaizany manao teny mampandry adrisa. Ankoatra ny toe-draharaha maro samihafa ahitana taratra izay tsy fahamatorana amin’ny fitantanan-draharaha izay, vao tsy ela izao ary ao anatiny mihitsy ankehitriny, dia ny fihetsiky ny eo anivon’ny prefektioran’Antananarivo manoloana ny hetsiky karakarain’ny antoko TIM eny amin’ny Kianjaben’i Mahamasina ny Sabotsy 08 Jolay ho avy izao.
Efa nanome alalana ity antoko ity ny tompon’andraikitra ny ahafahany manatanteraka izany, kanefa dia nivadika amin’ny fanapahan-keviny indray andro vitsy aty aoriana. Nambara avokoa tao anatin’izany ny antony nandavana indray ny fahazoan-dalana efa nomeny teo aloha, izay niantsoana haino aman-jery tahaka ny mahazatra fanaony. Rehefa dinihina lalina anefa ireo antony ireo dia tsy vao toe-javatra sambany eo amin’ny tantara akory, fa efa fantatra hatry ny ela ny fisiany. Ohatra amuin’izany ny zava-nitranga tamin’ny 26 Jona tamin’ny taon-dasa, raha asa fampihorohoroana no resahina. Ny mpanakorontana ihany koa amina hetsika samihafa efa fomba ratsy natao teto izany hatrany amin’ny taona 2009. Ka nahoana andro vitsy aty aoriana ny fanomezan-dalana vao tonga saina ny amin’izany ny tompon’andraikitra eo anivon’ny prefektiora?
Zavatra roa no azo sintonina ao anatin’izao fihetsika fanakantsakanana ny hetsika kasain’ny antoko TIM ho tanterahina izao. Ny iray, dia ny tahotra ny antokon’ny Filoha teo aloha Marc Ravalomanana izay mitarika azy sy izy tenany mihitsy no be dia be. Efa nanambara izay ny maro. Maneho miharihary izany fa tena mbola manana ny maha izy azy ny mpitarika ny antoko TIM sy ny mpanaraka azy raha eto amin’ny firenena matoa mitakemotra toy izao ny prefektiora. Ary raha ny fahafantarana ny toe-draharaha eto amin’ny firenena sy ny fomba fiasan’ny fitondrana Hvm, dia tsy maintsy nisy teny midina tao ambadika tao, fa tsy mandehandeha ho azy izao. Fihetsika efa fahita matetika eto amin’ny firenena izany fa tsy vaovao akory. Ny faharoa, dia midika tsotra izao, fa tsy fahamatorana eo amin’ny fomba fitantanam-pirenena izao fihetsika izao.
Fandambolambon-dresaka fotsiny ihany, ny amin’ny mety hoe zo samihafa noresahina niarovan-tena, ka nilazàna fa hoe mety miova rahampitso fa tsy ho azonao indray. Maninona raha mandinika lalina vao mandray fanapahan-kevitra amin’ny fitantannana ity firenena ity? Ny karama omen’ny vahoaka azy anefa midangana mampanonofy ny mpiasa madinika. Moa raha tany amin’ny orinasa tsy miankina no manao fomba fiasa toy izao tsy efa voaroaka ve? Fa mety rehefa aty amin’ny sehatry ny fanjakana? Ahoana no tsy ahafantaranao ny “contexte” misy ankehitriny eo amin’ny fiainam-pirenena?
Ny tsy fahamatorana amin’ny fitantanana firenena toy izao, izay ohatra iray eo anivon’ny fitondram-panjakana, no mahapotika ity firenena ity sy mampahantra ny vahoaka Malagasy toy izao. Tokony handini-tena lalina rehefa tsy mahafehy asa toy izao…
Fitondrana HVM: tsy misy hazon-damosina ka mivadibadika hevitra lava
Sarotra dia sarotra ny manome famaritana mifanaraka amin’ny fihetsika sy fomba fiasa ary fitantanan’ ny manampahefana amin’izao Repoblika IV izao. Tsy mahagaga raha misavoritaka sy tsy misy mihodina mifanaraka amin’ny lojika ateraky ny tranga sy ny fiainana ary ny fihetsika eo amin’ny sehatra rehetra ny fanapahan-kevitra raisin’ny mpitondra. Manambara ombieny ombieny ny fitondrana HVM fa mahafantatra ny fahoriam-bahoaka sy miaraka amin’ny vahoaka ary tsy mikatsaka afa tsy ny fampandrosoana ny Firenena.
Raha mahafantatra ny fahoriana sy fahantran’ny vahoaka marina izao fitondrana izao dia tsy mandeha any ivelany isaky ny mihetsika, toy ny akoho mantsin’atody ka mivoaka miditra tsy misy farany, ka mandany ny volam-bahoaka aminan-jato tapitrisa ariary isaky ny mandeha. Tsy hita ary tsy azo tsapain-tànana anefa izay tamberina ho an’ny vahoaka sy ny Firenena. Iaraha-mahatadidy ny valintenin-dRajaonarimampianina Hery, filohan’ny Repoblika, raha nanontanian’ny mpanao gazety momba ny fahatran’ny Malagasy izy ka sahy namaly hoe: “aiza ny porofo fa misy mahantra any Madagasikara”?
Raha ny fantatra anefa dia ny tena foto-diany any ivelany dia mangataka fanampiana na dia mody mamporisika ny mpandraharaha vahiny hampiasa ny volany eto amin’ny Firenena aza. Miteraka asa ho an’ny mponina izany saingy ny mpandraharaha malagasy eto an-toerana no tadiavina ny hevitra sy ny fomba rehetra entina mampiroborobo ny sehatra ampiasainy ny volany ka ny vola laniana miantso mpandraharaha avy any ivelany no entina manampy azy amin’ny fanatsarana ny fitaovana sy manao tolotr’asa mifanandrify amin’izany ho an’ny mpiray tanindrazana. Nankatoavin’ny filan-kevitry ny tahirim-bola iraisam-pirenena, hono, ny famatsiam-bola dia mirehareha fatratra ery fa manga ny lanitra eo amin’ny fifandraisana. Raha ny marina anefa dia mbola mitsipotipotika izany famatsiana izany satria mitsinjara ao anatin’ny taona maro.
Ny famerenana izany koa dia mbola ny Malagasy ihany no mibaby ny trosa am-polo taona maro. Ary io dia mbola misy fepetra indray ka ny vahoaka ihany no mizaka izany fepetra apetraky ny FMI na ny Tahirim-bola Iraisam-pirenena izany. Manome vola ny any ivelany, tsy noho ny hata-piso fa noho ny fahitan’izy ireo fa mahantra ny vahoaka ary azo inoana fa tsy maintsy hanara-maso akaiky ny hampiasana izany vola izany izy. Na izany na tsy izany dia tsy matoky tena intsony izao fitondrana izao ka mihazakazaka any amin’ny firenena sinoa satria ry zareo no mampanantena hanorina fotodrafitrasa kanefa ny tambin’izany no mbola zava-miafina. Izay ny fifandraisana amin’ny any ivelany ara-bola kanefa matoa tsy mbola misy masoivoho neken’ireo firenena nandefasana ny olona tokony hiasa any na iray aza dia mampisalasala izany ny momba azy ireo. Ny vola entina handoavana ny karaman’ny olona sy ireo mpiara-miasa aminy koa mbola hifampitadiavana satria ny vatsim-pianarana ho an’ny mpianatra aza tsy nisy, toy ny tany Shina.
Na inona na inona lazaina dia marisarisa ny fifandraisan’i Madagasikara amin’ireo firenena vahiny. Raha ny fifandraisan’ny samy Malagasy indray dia tsapa amin’ny ataon’ny mpitondra fa manangam-pahavalo tsy amin’ny politisiana ihany fa amin’ny vahoaka koa. Niaraha-nahita ny raharaha Antsakabary ary miverina indray izao ny olana ao Soamahamanina. Nahantona ny fitrandrahana kanefa hitan’ny mponina any indray izao fa miverina tsikelikely ao indray ny sinoa. Mitohy ny ahiahin’ny mpiray tanindrazana momba ny raharaha Razaimamonjy Claudine ka efa hitam-poko hitam-pirenena ny niarovan’ny minisitry ny fitsarana sy ny senatera Andriamandavy VII Rina azy dia miditra an-tsehatra indray ny minisitry ny serasera rehefa nivoaka tamin’ny tambazotran-tserasera ilay resaka an-telefônina nifanaovan’ity ramatoa ity tamin’ny Birao Mahaleotena Miady amin’ny Kolikoly. Tsy ny fahafantarana izay nanaparitaka izany no zava-dehibe fa ny fanekena ny fisiany sy ny fahamarinan’izany. Tsy nilaina ny fiarovantenan’ny Birao Mahaleotena fa ampy ny fanamafisany fa nisy iny resaka an-telefônina iny. Vao omaly ny omaly indray no niverin-dàlana ny prefektioran’Antananarivo ka nisintona ny fanomezan-dàlana ny TIM hanamarika ny faha- 15 taona nijoroany.
Tsy kilalaon-jaza ny fanapahan-kevitra toy izany ka “omeko tsy omeko ”. Manamboninahitra marobe toy ireny no nivory dia tsy nisy nanan-kevitra momba izay fomba hisorohana ny mety ho fanakorontanana. Raha ny am-pahafolon’ny nahetsika tamin’ny 26 Jona 2017 teo fotsiny no halefa ao Mahamasina miampy izay an’ny antoko TIM dia azo inoana fa hilamina ao amin’io fotoana io. Natao hiaro ny vahoaka sy ny fananany ny foloalindahy fa tsy natao hiaro ny mpitondra sy ny sezany. Raha ny fanamarihana ny fahatelo taonan’ny HVM tany Toliara moa no natao toy izao dia tsy nanaiky izany Rakotovao Rivo, filoha nasionalin’ny HVM. Azo antoka fa tsy misy amin’ireo antoko an-jatony mijoro amin’izao fotoana izao no ho sahy hanao hetsika ataon’ny TIM izao. Rehefa manapakevitra ny manampahefana dia manome hasina izany ary miaraka mitady hevitra amin’ireo mpiaramiasa aminy ny hevitra rehetra entina mandrindra hiarovana izany satria ny fiverenana amin’ny fanomezan-dàlana dia mitory fahalemena ka mahamenatra sy manala Baraka ny tena eo imason’ny mpiray tanindrazana.
Tsy hitan’ny mpitondra eto amintsika intsony izay lalana hizorana
Marobe ny olona ankehitriny no mametraka fanontaniana manao hoe : fa inona no mahazo ity fitondrana ity ? Raha jerena amin’ny fomba mahitsy dia toa tsy hitan’ny mpitondra fanjakana izay lalana hizorana amin’ny fitondrana ny firenena . Tsy vita ny atsy dia tsaingohana ny eroa ; vokany dia mivangongo ny olana ka mahatonga ny olom-pirenena hilaza fa tsy mahavaha olana ny mpitondra . Tsy ny Filohampirenena ihany no iantefan’ny tsikera fa ny fitondram-panjakana iray manontolo mihitsy indrindra ny mpanatanteraka . Miakatra ny vidim-piainana , mahazo vahana ny tsy fandriampahalemana amin’ny endriny maro saika manerana ny nosy , mitombo ny tsy manana asa , sy ny maro tsy voatanisa .
Variana manenjika ny Tim ny mpitondra fa tsy izay hamahana ny olana mianjady amin’ny vahoaka no atao . Ny voamarika dia miezaka manarona ny marina ny fitondrana saingy tsy vitany. Ny Tvm sy ny Rnm miampy ireo Haino aman-jery tsy miankina sasantsasany no azon’ny mpitondra atao amin’izay tiany fa ny hafa kosa tsy afaka anaovana izany indrindra ny mpanao gazety vahiny . Rakotry ny kolikoly sy ny fahalovana i Madagasikara izay fantatr’izao tontolo izao amin’ny antsipiriany ny marina eto Madagasikara ; mahamenatra sy mampisitrika any ambany fandriana ny fiainan’ny Malagasy . Tsy nahagaga raha nanapa-kevitra ho mpanohitra ny Tim satria tsy misy azo antenaina sady sarotra hatoro .
Vao mainka manaratsy endrika ny fitondrana ny fanakanana ny Tim tsy hanamarika ny tsingerintaonany faha-15 etsy Mahamasina . Amin’ny maha tsingerintaona azy dia hibahan-toerana ny fety ary tsy ambanin-javatra ny Fivavahana fisaorana an’Andriamanitra , ka inona no tsy zakan’ny vavonin’ny sasany amin’izany ? Azo antoka mantsy fa olona tsy tambazana 5 Arivo Ariary tahaka ny ketriky ny Hvm tamin’ny nijery matso no ho tonga eny Mahamasina amin’ity fetin’ny Tim ity fa olona resy lahatra . Afaka mandefa olona ny Hvm raha liana amin’io fety io saingy lazaina mialoha fa tsy hisy ny fizaram-bola satria midika ho fandatsana ny mpiray tanindrazana izany, sa ahoana hoy ianao?
Manahy aho fa hisy ny “rotaka amboarina”,
Hoenti-mandoto ny anaran-dRavalo.
Ka miomankomàna , ny hendry no anarina,
Avia mijoroa , aza misy mimalo.
Mitranga dia mihemotra iretsy mpitondra.
Nomeny ny alalana , avy eo dia nofoanany
Tsy `zany va ilay hoe “lohan`ampondra”?
Mamotika ny hafa no mba fiadanany !
Antoko efa tsy avotra mantsy raha tsorina
Ity te hamingana ny mpifanandrina,
Ka ny efa mafy sy ny tsara orina,
Sotasotainy mba ho vaky handrina.
Ny hafatra anefa dia tokana ihany
Ry tsy mba mivadika ny efa nekena:
Ny TIM indray dia tsy taitran`izany,
Tsy mataho-tsedra satria volamena.
DADAN`i ZINA (05-07-17).
Galerie | Cet article, publié dans Non classé, est tagué HVM, Mahamasina Tim, Marc Ravalomanana, Ny Valosoa 6 Jolay, Ny Valosoa Vaovao, TIM. Ajoutez ce permalien à vos favoris.